Rabindra Neupane: जेलमा जाकिनु पर्नेहरु
हरपल तपाइको साथमा........
पुराना सामाग्रीहरु April 2007 (1) May 2008 (3) November 2008 (1) August 2009 (1) April 2010 (1) July 2010 (2) October 2010 (1) November 2010 (3) January 2011 (1) March 2011 (2) June 2011 (1) September 2011 (1) October 2011 (1) February 2012 (1)
देशकै मध्य भागमा अवस्थित यस मकवानपुर जिल्लाको नामकरण.... more ...
जेलमा जाकिनु पर्नेहरु
2 Comments/ प्रतिक्रिया
नेपाल वायु सेवा निगम अर्थात् नेपालको राष्ट्रिय ध्वाजावाहक वायु सेवा निगम । त्यतिले मात्र परिचय खुल्दैन । जुन व्यवस्था आयो त्यसैको कमाई खाने अड्डा, जसको सरकार बन्यो उसैको रजाई गर्ने थलो बन्दै आएको छ नेवानि । पञ्चायतमा राजाका आसेपासेहरुले लुटे, बहुदलमा दलका नेताहरुले पालैपालो लुछे । अहिले त थला परेको छ नेवानि । पहिला पहिला जहाज किन्ने र भाडामा लिने नाममा लुटिन्थ्यो । तर लुट्नलाई केही बाँकी छैन, त्यसैले बचेखुचेका इञ्जिन बनाउन पनि कमिशनको खेल हुन थालेको छ । यही अवस्था हो भने नेवानि केही समयमै बन्द हुनेछ । लाग्छ नेवानि बन्दै भए पनि कमिशनको खेल रोकिनेछैन, जहाजका अस्थिपञ्जर कवाडीमा बेच्न पनि मारामार हुनेछ ।
नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारलाई गत आइतबार जेल चलान गरियो । विमान खरिदका लागि फ्रान्सेली कम्पनीलाई कंसाकारले निगम सञ्चालक समितिको निर्णयविना नै डेढ वर्ष अगाडि ५ करोड ७३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बैना रकम पठाएका थिए । ठूलो भाग खान खोजेका थिए, कंसाकार । तर जेलमा जाकिए । कमिसनको चक्करमा लाग्नेहरु जेलमा जाकिनु नराम्रो होइन । तर जेलमा जाकिनुपर्नेहरु अरु धेरै छन् । किनभने निगममा काण्ड मच्चाउनेहरु कंसाकार मात्र होइनन् ।
धमिजा काण्ड, चेज एअर काण्ड, चाइना साउथवेष्ट काण्ड र लाउडा काण्ड । काण्डैकाण्डको अखडा बन्यो नेपाल वायु सेवा निगम । फरकफरक राजनीतिक पृष्ठभूमिका फरकफरक नेताहरुले नेवानिमा धुलो उडाए । अरुले भ्रष्टाचार गर्दा संसद्मा कुर्लनेहरु त आफ्नो पालो आउनासाथ झन् तीव्र गतिमा लुट्न आतुर भए । जनताले श्राप दिए, तर लुट्नेहरुले बेपरबाह लुटे, लुटिरहे ।
विमान खरिद गर्दा होस् या भाडामा लिँदा, राज्यका शक्तिशाली व्यक्ति र परिवारले कमिशन लिएरै छाड्छन् । उदाहरण छन्– जहाज खरिद काण्ड, धमिजा काण्ड, चेज एयर काण्ड, चाइनासाउथ वेष्ट काण्ड, लाउडा काण्ड र यस्ता धेरैधेरै काण्ड । कतिसम्म भने, निगमको व्यस्त व्यावसायिक जहाज लिएर हप्तौंसम्म शयर गर्न पनि हिंडे राज्यका हर्ताकर्ताहरु ।
२००८ सालमा जामा एयर नामक भारतीय कम्पनीले काठमाडांैको सानो गौचरनबाट भारतको पटनाका लागि नेपालबाट पहिलो उडान भरेको थियो । त्यसको ठीक ६ वर्षपछि अर्थात् २०१४ साल असार १७ गते राष्ट्रिय ध्वाजावाहकको रुपमा नेपाल वायु सेवा निगमले उडान सुरु ग¥यो । निगम सुरुदेखि नै सरकारी स्वामित्वमा छ । सुरुवातताका आन्तरिक र बाह्य सेवाका लागि निगमसँग आठ प्रकारका जहाज थिए । तीमध्ये डगलस घ भनिने २८ सिटको ‘डकोटा’ विमान थियो । नेवानिका लागि पहिलो उडान भर्ने डकोटा विमान पछि विस्थापित भयो । १२ सिटको फङ्स हार्भेस्टार विमान पनि निगमले सेवामा लगायो । निगमसँग यस्ता दुई विमान थिए । छोटो समयको उडानपछि यी विमान पनि विस्थापित भए । पिलाटस पोर्टर भनिने ‘पीसी–६’ विमान पनि विस्थापित भइसकेको छ । एउटा मात्र इन्जिन भएका यी विमानमा ६ सिट हुन्थे । अर्को फोकर फ्रेन्डसिप भनिने ‘एफ–२७’ विमान पनि आन्तरिक र बाह्य दुवै उडानमा प्रयोग गरियो । यो विमान ४४ सिटको थियो । ४४ सिटको एभ्रो विमान पनि विस्थापित भइसकेको छ । ३७ वर्ष अघि ट्वीनअटर विमान नेपालमा भित्रिए ।
२०२८ सालमा निगमले बोइङ ७२७ खरिद गरेपछि नेपाल जेट उडानमा प्रवेश ग¥यो । निगमसँग १ सय २३ सिट क्षमताका यस्ता विमान दुईवटा थिए । त्यसपछि १९० सीट क्षमताको बोइङ ७५७ निगम पनि ल्यायो निगमले । बोइङ ७५७ पनि दुई वटा थिए । यसरी चार वटा जेट विमानले नेपाललाई विश्वका थुप्रै शहरसँग जोडेका थिए ।
तर, बल्लबल्ल बामे सर्दै गरेको नेपाल वायु सेवा निगम २०४६ सालपछि स्वदेशी र विदेशी हवाई माफियाको चङ्गुलमा फस्यो । २०५० सालसम्म नेपाल वायु सेवा निगमको अवस्था राम्रै थियो । तर, जतिबेला भएका २ वटा बोइङ अनेक तानाबाना बुनेर बेचियो, त्यसपछि सुरु भयो निगमको अधोगति ।
आफ्ना विमान बेचेर विदेशी विमान भाडामा लिने र कमिसन खाने फोहोरी राजनीति सुरु भयो नेपाल वायु सेवा निगममा । त्यसपछि निगम ठूलाबडाका लागि सुनको फूल पार्ने कुखुरी बन्न थाल्यो ।
को–को छन् लुटमा संलग्न प्रतिष्ठित घरानियाहरु ?
निगमको यो दुरवस्था नखोतलेकै ठीक छ, खोतल्यो भने प्रतिष्ठित राजनीतिक घरानाको नाम जोडिइहाल्छ । निगमको भ्रष्टाचारमा पटक–पटक नाम जोडिन्छ कोइराला परिवारको, त्यसमा पनि मुख्यतः सुजाता कोइरालाको ।
बहुदल पुनबर्हालीपछि सुजाताका पिता गिरिजाप्रसाद कोइराला पटक–पटक प्रधानमन्त्री भए । जतिपटक प्रधानमन्त्री भए, उतिपटक राज्यसंयन्त्रमा छोरी सुजाताको बोलवाला चल्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला २०४८ सालमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेपछि कोइराला परिवारका थुप्रै नातेदार र साथीहरु स्वदेश फर्कने लहरै चल्यो । जोजो फर्किए, उनीहरुले पाए राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा राजनीतिक नियुक्ति । सुजाताले सुरुमै खुलेर नियुक्ति त लिइनन्, तर नियुक्ति लिएकोभन्दा खतरनाक खेल खेलिन् ।
बिहेबारी गरी जर्मन पुगेकी एक्ली छोरी सुजाता कोइराला पनि बाबु प्रधानमन्त्री बनेपछि फर्किइन्, यतै बस्नेगरी । नोना कोइरालाका अमेरिका बस्ने छोरा निरञ्जन र डा. शेखर मात्र होइन, निरञ्जनका वकिल साथी प्रभाकर अधिकारी र शेखरका साथी डा. रामानन्द सिंह, कोइरालाका भाञ्जा शैलेश उपाध्यायसहितको ठूलो समूह नेपाल फर्कियो ।
विदेशमा जागिर मात्र खाएर बसेका उनीहरुले नेपालमा भने धमाधम राजनीतिक नियुक्ति पाउन थाले । नोनाका छोरा निरञ्जन पर्यटन मन्त्रालयका सल्लाहकार नियुक्त भए । उता शेखरका साथी रामानन्द सिंहले नारायण सिंह पुनलगायतसँग मिलेर डाइनास्टिक एभिएसन नामको निजी हवाई कम्पनी दर्ता गरे । त्यसबेला नेपाल र जर्मनीबीच लुफथान्सा एयरलाइन्स चल्थ्यो । लुफथान्सा नेपाललाई युरोपसँग जोड्ने एक मात्र विदेशी विमानसेवा थियो । त्यतिखेर नेपाल वायु सेवा निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानको जिम्मा लुफथान्सालाई दिने प्रस्ताव आयो । त्यसको योजनाकार थिइन्, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी सुपुत्री सुजाता कोइराला । यही बिन्दुबाट धमिजा काण्डको शिलान्यास भएको हो ।
सुजाता नेपाल आएलगत्तै २०४९ साल चैत १८ गते शानेवानिको युरोप क्षेत्रको जनरल सेल्स एजेन्ट (जीएसए) नियुक्त गर्ने निर्णय भयो । युरोपको एजेण्ट कसलाई बनाउने ? यो निर्णय त पहिले नै भइसकेको थियो । सुजाता र उनका पति जर्मन नागरिक नोबर्टकोे सिफारिसअनुसार भारतीय मूलका बेलायती नागरिक दिनेश धमिजाको फेयर कम्पनीलाई जीएसए बनाइयो । धमिजा यसअघि नै नेवानिका लागि बेलायतका एजेन्ट थिए । सुजाताको सहयोगले युरोपभरिको जिम्मा पाए ।
सेल्स एजेन्टलाई ९ प्रतिशत कमिशन दिने विश्वव्यापी प्रचलन थियो । बाबु प्रधानमन्त्री भएको मौकामा सुजाताले धमिजालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनभन्दा बढी कमिशन दिलाइन् । कति बढी दिलाइन् होला ? तपाईं अनुमान गर्नोस्, दोब्बर ? तपाईंको अनुमान मिलेन । धमिजाले चार गुणा बढी अर्थात् ३८ प्रतिशत कमिशन पाए । यसरी एजेन्टलाई ९ प्रतिशत कमिशन दिने विश्वव्यापी चलन हुँदाहुँदै शानेवानिले दियो ३८ प्रतिशत । चार गुना बढी कमिशन धमिजा एक्लैले पक्कै खाएनन्, सुजाताले पनि खाइन् । यसबाट निगमलाई ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँ नोक्सानी भयो । हो, ३९ करोड ५० लाख । जनताको बलिदानीपछि बहुदल पुनस्र्थापना भयो, बहुदल स्थापनापछि निर्वाचित पहिलो प्रधानमन्त्रीको प्रभाव प्रयोग गरेर शानेवानिलाई ३९ करोड ५० लाख घाटामा पारियो । यो कुनै नेताले चोकमा उभिएर लगाएको आरोप होइन, २०५८ सालमा दामोदर न्यौपानेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनमा प्रष्टै उल्लेख छ ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रामहरि जोशीका अनुसार धमिजालाई युरोपको एजेन्ट नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नै बैठक भएको थियो । निगमको एजेण्ट नियुक्त गर्न त निगमकै कार्यालयमा बैठक हुनुपर्ने हो, तर बैठक भयो बालुवाटारमा । बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि सहभागी थिए ।
निगमको एउटा एजेण्ट नियुक्त गर्न बसेको बैठकमा देशमा प्रधानमन्त्री बस्छन् । अब अनुमान गर्नोस्, खेल कति ठूलो हुँदोरहेछ ? बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला, पयर्टनमन्त्री रामहरि जोशी, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष भुवनेश्वरप्रसाद दैवज्ञ, महाप्रबन्धक प्रदीपराज पाण्डे र स्वयम् दिनेश धमिजा पनि सहभागी थिए । त्यही बैठकले धमिजालाई अत्यधिक अधिकारसहित सेल्स एजेन्टको जिम्मा दिएको थियो ।
धमिजाको काम तत्काल गरिदिनु भनेर प्रधानमन्त्री कोइरालाले आदेश दिए, मन्त्री जोशीले शिरोपर गरे । यो त कास्टिङ मात्रै थियो, कथाको पूर्ण अंश त लेखिनै बाँकी थियो । कथा अघि बढ्दै जाँदा बोइङ ७२७ बिक्री काण्ड र लाउडा काण्ड पनि भए । यी सबैमा सुजाता कोइरालाको नाम जोडिएको छ । एउटा कारभन्दा सस्तो मूल्यमा बेचियो शानेवानिको जहाज । धमिजासँग सम्झौता भएको करिब एक वर्षपछि निगमका दुईवटा बोइङ ७२७ बिक्री गरियो । त्यो पनि कौडीको भाउमा । ती दुई विमान बिक्री गरेदेखि नै निगमको अधोगति सुरु भएको हो । अरु कम्पनीले सम्पत्ति जोड्दै जान्छन्, तर शानेवानिका हाकिम र हाम्रा नेताहरु मिलेर सम्पत्ति बिक्री गर्न थाले ।
शानेवानिसँग जम्मा चार वटा जेट विमान थिए, दुई वटा बेचियो । दुनियाभरको आकाशमा उडिरहेको, पैसा कमाइरहेको विमान बिक्री गर्ने निर्णयमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला र छोरी सुजाताकै नाम जोडियो ।
चलिरहेको एउटा जेट विमान बनाउन भनेर जर्मनी लगियो । तर यो कामै लाग्दैन भनेर ६० हजार डलरमा बेचियो । ६० हजार डलर अर्थात् ४३ लाख २० हजार नेपाली रुपैयाँमा । ४३ लाखमा त गतिलो कार पनि आउँदैन, तर त्यही भाउमा जेट विमान बेचियो । टाढा होइन, एकपटक हङकङ गएर फर्कंदा एउटा जेटले ६० लाख कमाउँछ, तर सिंगो जहाज बेचियो मात्र ४३ लाखमा । हो केवल ४३ लाखमा । सुन्दा पनि रिंगटा लागेर आउँछ, तर सत्य यही हो ।
अर्को जहाज एउटा अफ्रिकी कम्पनीलाई बेचियो । त्यो नयाँ जहाज मजासँग उडिरहेको थियो । त्यो कुखुरीले राज्यका लागि फूल पारिरहेको थियो । तर कोइराला सरकारले फूल होइन, सिंगै कुखुरा नै काट्यो । स्वार्थ पूरा गर्न, फगत व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न । त्यो ज्यानदार जहाज अहिले पनि उडिरहेको छ र अफ्रिकी कम्पनीका लागि पैसा कमाइरहेको छ । तर हाम्रा नेताले जहाज बेचेर आफ्नो खल्ती भरे, जनताको सम्पत्ति शानेवानिलाई ध्वस्तप्राय बनाए ।
निमगले आफूसँग भएका जहाज बिक्री गरेर चुप लागेन । नयाँ जहाज चाहियो भनेर किन्ने योजना बन्यो । भएको छोरो मारेर नयाँ छोराको आश । तर बेचेर आएको कमिशनले पुगेन, त्यसैले नयाँ जहाज किन्ने अभ्यास सुरु भयो । पहिले जहाज नै किन्ने भनियो, पछि भाडामा ल्याएर चलाउन थालियो ।
धमिजा र जहाज बिक्री काण्डपछि सुजाता कोइराला सायद अर्को काण्डको डिजाइन गर्दै थिइन् । तर तत्काल पूरा भएन किनकि २०५१ सालको चुनावमा कांग्रेसले चुनाव हा¥यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रतिपक्षमा बसे, छोरी सुजाताको हालिमुहाली स्थगित भयो । हो, उनको योजना पूर्णतः रोकिएको थिएन, स्थगित मात्र भएको थियो । जब २०५६ सालको चुनावपछि प्रधानमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई ६ महिनामै हटाएर कोइराला बालुवाटार पुगे । २०५६ चैत ८ गते नयाँ सरकार बन्यो, त्यही दिनदेखि सुजाता नयाँ शक्तिकेन्द्रका रुपमा उदाइन् । कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई फाल्ने ? निर्णयमा सुजाताको प्रत्यक्ष हात हुन्थ्यो । त्यसैले भनिन्छ, त्यतिबेला तारणीदत्त चटौतलाई पर्यटनमन्त्री बनाउन पनि सुजाताकै रुचि थियो । चटौत अगाडि देखिए, सुजाता पछाडि उभिइन् । बीचमा थिए शानेवानिका कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक हरिभक्त श्रेष्ठ ।
त्यतिबेला शानेवानिका आफ्नै दुई वटा र भाडाको एउटा विमानले उडान भरिरहेका थिए । तर सरकारले आकस्मिक निर्णय ग¥यो, जहाज अर्को पनि चाहियो । थप निर्णय भयो, अष्ट्रियाको लाउडा एयर कम्पनीसँग विमान भाडामा लिने । २०५७ साल असोज १६ गते पर्यटन मन्त्रालयमा बसेको तत्कालीन शानेवानी सञ्चालक समितिको बैठकले लाउडा एयरबाट विमान भाडामा लिने निर्णय ग¥यो । शानेवानिसँग तीन वटा जहाज चालु भइरहेकै बेला विनायोजना लाउडाको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लियो । त्यसपछि भयो निकै ठूलो विवाद ।
लाउडा विमान भाडामा लिने सम्झौता हुनुअघि सुजाता र चटौतकी पत्नीसँगै सिंगापुर गएका थिए । कञ्चनपुरका विपन्न जनताको भोट जितेर सांसद र मन्त्री बनेका चटौतकी पत्नीलाई सपिङ गर्न सिंगापुर जानुपर्ने ? कसको पैसाले ? उल्फाको धन फूपुको श्राद्ध भनेको यही हो ।
चटौत पत्नीले सिंगापुर त गइन् किनभने त्यो बेलासम्म सम्झौता भइसकेको थिएन । जब सम्झौता भयो, चटौतको भागमा जम्मा पाँच लाख प¥यो । कमिशनवापत ३८ करोड ल्याइयो, तर विभागीय मन्त्रीले पाए जम्मा पाँच लाख । सबैभन्दा बढी बदनामी चटौतको भयो, अख्तियार पनि धाउनुप¥यो । तर उनको पारिवारिक स्रोतको भनाइ छ, छोरी लतालाई भारतको बैंगलोरस्थित डेण्टल कलेजमा भर्ना गर्न पनि चटौतलाई मुश्किल परेको थियो ।
चटौतको त विजोग नै भयो, ३८ करोडको अधिकांश हिस्सा सुजाताकै पोल्टामा गयो । यो पनि हावादारी तथ्य होइन, लाउडाकाण्डमा ३८ करोड ९७ लाख ६७ हजार ३१ रुपैयाँ अनियमिता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
एमाले पनि के कम ?
नेवानिभित्रको भ्रष्टाचारको कथा यति लामो छ, जसको बयान गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनागलाई पनि गाह्रो पर्छ । नेवानिलाई ब्रह्मनालमा पु¥याउने पञ्चायत मात्र होइन, कांग्रेसको परिवार मात्र होइन । एमालेबाट मन्त्री भएका भीम रावल र मालेका यामलाल कँडेलको समयमा पनि नेवानिमा भ्रष्टाचार विवाद भयो । विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुग्यो । केही मुद्दा थाती राखिएको छ, केही मुद्दामा तत्कालीन मन्त्री र नेवानिका अधिकारीले सफाइ पाइसकेका छन् ।
अख्तियारले सफाइ दिए पनि जनताले भने सफाइ दिएका छैनन् ।
लाउडा काण्ड त २०५७ सालमा भएको हो, त्यसअघि नै भइसकेका थिए धमिजाकाण्ड र जहाज बिक्री काण्ड । यी विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच थुप्रै विवाद भए । वामपन्थी दलहरुले सडक आन्दोलन नै गरे, सदनका बैठक अवरुद्ध पारे । मुख्य विपक्षी नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले धमिजा काण्डलाई चुनावी एजेन्डा नै बनाए । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न कसम पनि खाए जनतासँग । २०५१ मा एमालेले चुनाव पनि जित्यो । तर धमिजा र जहाज बिक्री काण्डका भ्रष्टाचारीलाई कारबाही भएन । बरु, थपिए चेज एअर काण्ड र चाइना साउथवेष्ट काण्ड ।
२०५१ सालमा एमालेले ९ महिने सरकार चलायो । तर सरकारबाट हट्नासाथ तत्कालीन उपमहासचिव वामदेव गौतमको जिम्मेवारी पार्टीले फिर्ता माग्यो । यो विषयबाट सुरु भएको विवाद चर्किएर महाकाली सन्धिमा भयानक रुप लियो । जसका कारण एमाले विभाजित भयो । वामदेव गौतमको नेतृत्वको माले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा गयो । माले नेता यामलाल कँडेल बने पयर्टन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री । २०५५ साल असोजमा कांग्रेस र मालेको गठनबन्धन सरकार बनेको केही समयमै नेवानिमा अर्को बबण्डर मच्चियो । जसलाई नेवानिका कालो इतिहासमा चेज एयर काण्डका रुपमा चिनिन्छ । चेज एयर नामक अमेरिकी कम्पनीसँग निगमले विमान खरिद गर्न सम्झौता ग¥यो । विमान खरिद गर्न ५ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब साँढे ३ करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरिएको थियो । तर, चेज एयर फर्जी कम्पनी रहेछ । हुँँदै नभएको कम्पनीले कसरी पठाओस् विमान । काम गरिरहेका कम्पनी पनि विश्वसनीय हुन् कि होइनन् भनेर बुझ्नुपर्छ सरकारी अधिकारीहरुले । तर राष्ट्रिय सम्पत्तिको पैसा पठाउँदा जिम्मेवार बनेनन् मन्त्री र नेवानिका अधिकारीहरु । त्यो रकम पनि त्यतिकै खाडलमा गयो । यामलाल कँडेल पर्यटनमन्त्री थिए भने नेवानिका महाप्रबन्धक थिए, हङकङ राना मगर । ठगी गरेको आरोपमा चेज एयरका सञ्चालक भनिएका शुशील उइन्टरविरुद्ध नेपाल सरकारले अमेरिकी अदालतमा मुद्दा त हाल्यो । तर २ करोडबाहेक उठाउन सकेन । नेकपा एमाले र माले टुक्रिएकाले पनि एमालेले चेज एयर काण्डलाई निकै उचाल्यो । सडकदेखि सदनसम्म जताततै नाराबाजी भए । तीव्र विवाद भएपछि तत्कालीन महाप्रबन्धक हङकङ रानामगर, निर्देशकद्वय अच्युत गौतम र गजेन्द्र श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता ग¥यो । गौतम र श्रेष्ठलाई अख्तियारले सफाइ दिएको छ ।
मालेका मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरे भनेर एमालेले चर्को विरोध ग¥यो । विवाद बढ्दै जाँदा माले सरकारबाट बाहिरियो, एमाले भित्रियो । एमालेबाट पयर्टनमन्त्री बने, भीम रावल । अनि कथा बन्यो, चाइना साउथवेस्ट काण्डको । २०५५ सालको मंसिरमा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बन्यो । कांग्रेस र मालेले निगम डुबाए भन्दै सदनदेखि सडक तताउने नेकपा एमालेबाट पर्यटनमन्त्री बनाइएका भीम रावल चाइना साउथवेष्ट काण्डमा मुछिए । नयाँ मन्त्री आउनासाथ नयाँ जहाज भाडामा लिने त परम्परा नै बनेको थियो त्यतिबेला । नेवानिले एउटा प्रस्ताव पाएको थियो प्रतिघण्टा ३८ सय डलरका भाडामा । तर नेवानिले चाइना साउथवेष्टसँग जहाज भाडामा लिने निर्णय ग¥यो जसको भाडा थियो ३३ सय डलर प्रतिघण्टा । नेवानिलाई हरेक घण्टा पाँच सय डलर अर्थात् ३५ हजार घाटामा पार्ने निर्णय भयो जानाजान । यसका मुख्य आरोपी पर्यटनमन्त्री रावल । जहाज भाडामा लिँदा अनियमितता भएको ठहर गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिले रावलविरुद्ध कारबाही अगाडि बढाएपछि सिंगो एमाले विवादमा तानियो । विवाद बढेपछि रावलले एमालेको केन्द्रीय सदस्य र साधारण सदस्यबाट समेत राजीनामा दिए ।
चाइना साउथवेष्ट काण्डसम्बन्धी मुद्दा अख्तियारसम्म पुग्यो । अख्तियारले १० महिना लगातार अनुसन्धान ग¥यो । तर पछि अख्तियारले सफाइ दियो रावललाई ।
अख्तियारले सफाइ दियो तत्कालीन मन्त्री रावललाई । सफाइ त लाउडा काण्डका तारणीदत्त चटौतलाई पनि दियो । भ्रष्टाचारको अभियोगमा अधिकांश आरोपीले सफाइ पाएका छन् । जनता भन्छन्, लाउडा, चेज र चाइना साउथवेष्ट पनि यसैका उदाहरण हुन् ।
ज्ञानेन्द्रले पनि लुछे नेवानि
अचम्मै गरे नेताजीहरुले, अचम्मै गरे नेवानिका अधिकारीहरुले । कम्पनी सक्कली हो कि नक्कली हो भन्ने बुझ्दै नबुझी करोडौं रुपैयाँ पठाए । जनताको पैसा हो, कसलाई के मतलब ? ढुकुटीबाट उठाए पैसो, पठाए अमेरिका । पैसा विमान आउने कम्पनीमा होइन, खाडलमा गयो । अनि २८ सय डलर प्रतिघण्टामा भाडामा पाइन्थ्यो विमान, ३३ तिरे । जनताका प्रतिनिधिले त राष्ट्रिय सम्पत्तिमा धुलो उडाए भने परम्परागत शक्ति बोकेका तत्कालीन राजाले किन छाड्थे ?
अहिले पो पूर्वराजा भए उनी, केही वर्षअघिसम्म त उनको हुकुम चल्थ्यो । देश उनकै हुकुममा चलेको थियो भने एउटा नेवानिको के कुरा ? उनले पनि नेवानिको घोडा चढे, धोको फेरेर । प्रत्यक्ष शासनका क्रममा ज्ञानेन्द्र नेवानिको बोइङ लिएर अफ्रिका गए, शयर गर्न । एक्ला ज्ञानेन्द्र र उनकी जीवनसंगीनीलाई बोकेर नेवानिको जहाज अफ्रिकातिर बरालियो । एक दिन बन्द हुँदा नेवानिलाई करोडौं घाटा हुन्छ, तर ज्ञानेन्द्रलाई यसको के पर्वाह । उनी एक दिन होइन, दुई दिन होइन, २३ दिनसम्म नेवानिको बोइङ जहाजमा घुमे । यता नेवानिका नियमित उडान स्थगित भइरहे, उता ज्ञानेन्द्रको मोज चलिरह्यो ।
त्यतिबेलाको सबै खर्च पनि निगमलाई नै व्यहोर्न बाध्य पारियो । २०६२ साल कात्तिक २३ गतेदेखि मंसिर १४ गतेसम्म अर्थात् २३ दिनसम्म बोइङ नचल्दा निगमलाई करोडौं नोक्सानी भयो । हवाई इन्धन पनि नेवानिले नै ति¥यो । निगमले १ घण्टा बोइङ भाडामा दिँदा ११ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ७ लाख ७० हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ । यो हिसाबले ४० अर्बभन्दा बढी घाटा लाग्यो, त्यो त डुब्योडुब्यो । जहाज उड्दा इन्धनबापतको ४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पनि नेवानिले नै बेहोर्नुप¥यो । नयाँ शासन व्यवस्था आएपछि निगमले इन्धनबापतको रकम उठाउन पहल गरेको छ, पूर्व राजासँग होइन, भ्रमण गराउने परराष्ट्र मन्त्रालयसँग । निगमले बक्यौता रकमका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको ग¥यै छ । परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयले एकअर्कालाई देखाउँदै पन्छिने गरेका छन् । हुन त पञ्चायतकालमा पनि राजपरिवारले निगमको दुरुपयोग गरेकै हो । २०४६ सालपछि त्यो क्रम केही रोकिए पनि प्रत्यक्ष शासनकालमा फेरि पनि राजपरिवारले निगमको दुरुपयोग ग¥यो ।
जबजब निगम संकटमा पर्छ, तब सरकारले आयोग गठन गर्छ । आयोग बनाउनेबाहेक सरकारले वायु सेवा निगममा अहिलेसम्म केही गर्न सकेको छैन । ती आयोगका प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन भएनन् । दामोदर गौतमको संयोजकत्वमा बनेको होस् या डा. शंकर शर्माको संयोजकत्वमा बनेको आयोग । यिनीहरुले अनुसन्धान गर्ने र प्रतिवेदन बनाउनेबाहेक केही गर्न सकेनन् । कारबाही भएको छैन ।
निगमले अहिले आन्तरिक र बाह्य उडानमा निजी क्षेत्रका विमान सेवाहरुसँग कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । आन्तरिक उडानमा एकाधिकार जमाएको निगम अहिले प्रमुख शहरबाट विस्थापित भएको छ । विमान समयमा नउडाउने र सानो निहुँ पाउनासाथ उडान नै रद्द गर्ने प्रवत्ति निगममा हाबी भयो, जसको फाइदा उठाए निजी कम्पनीले । विराटनगर, पोखरा, सिमरा, भैरहवा, नेपालगञ्जजस्ता प्रमुख शहरमा निजी विमान सेवालाई सुम्पेर निगमका उडान यतिखेर बढी खर्च हुने र जोखिमपूर्ण पहाडी र हिमाली जिल्लामा सीमित भएको छ । बाह्य क्षेत्रमा प्रतिष्ठित विदेशी कम्पनीसँग कठोर प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको त छँदैछ, अहिले आएर स्वदेशी विमान सेवासँग झनै कठोर प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । निगमको विश्वासको दायरा तल्लो स्तरमा झरेकोले यात्रुहरु स्वेच्छाले निगमको विमानमा यात्रा नगर्ने स्थिति छ । त्यति मात्र कहाँ हो र ? अहिले १९ वटा एयरलाइन्सले काठमाडौंबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्छन् । स्वदेशी मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सेवामा पनि यसले निकै प्रतिस्पर्धा सामना गरिरहेको छ । २०४० को दशकदेखि नै थाई, इण्डियन र सिंगापुर एयरलाइन्ससँग निगमले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको छ । विभिन्न काममा सरकारी हस्तक्षेप त छँदैछ, निगमको आन्तरिक उडानको भाडा पनि सरकारले तोक्दै आएको छ । त्यसो त आन्तरिक उडानमा निगमले घाटा व्यहोर्दै आएको छ । जुन घाटा अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट पूर्ति हुँदै आएको छ ।
त्यसो त सरकारले दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा कोषसम्बन्धी नीति नबनाएको पनि होइन, तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा निगमलाई बर्सेनि २० करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ ।
२०४६ सालपछि सरकारले निगमलाई सरकारले कत्ति पनि रकम दिएको छैन । बरु थरिथरिका शासकले थरिथरिका बहाना बनाएर लुटिरहेका छन् । आफूले भ्रष्टाचार गरेर नपुगेर मन्त्रीहरुले आफन्तहरुलाई पनि नेवानिको छालामा रजाइ गर्न लगाएका छन् ।
व्यवस्था र मन्त्री फेरिनासाथ मोज गर्ने चलन कहिल्यै घटेन । कहिले विमान किन्न भनेर भ्रष्टाचार भयो, कहिले विमान बेच्ने भनेर भ्रष्टाचार भयो, कहिले भाडामा लिने भनेर भ्रष्टाचार भयो । अब ती सबै कथाजस्ता भए । अब नेवानि न जहाज किन्न सक्छ, न भाडामा लिन सक्छ । नेवानि सेलाइसक्यो, तर भ्रष्टाचारीहरु सेलाएका छैनन् । त्यसैले अहिले इञ्जिन मर्मतका नाममा भ्रष्टाचार हुन थालेको छ । दिन यस्तो पनि आउनेछ, नेवानिका जहाजका कवाडीमा पनि भ्रष्टाचार हुनेछ ।
पञ्चायतको हुकुमी शासन हो्स या बहुदलपछि । या त राजाको शासन कालमा नै किन नहोस् । निगमको दुरुपयोग हुने क्रम कहिल्यै रोकिएन, न त अहिलेसम्म नै यो क्रम रोकिन सकेको छ । निगम यो अवस्थामा पुग्नुमा निगमका कर्मचारी नै मुख्य कारक रहेको विचार राख्नुहुन्छ, पूर्वपर्यटनमन्त्री रामहरि जोशी । मन्त्रीहरुलाई अनेक लोभलालच देखाएर निगमका कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्ने गरेको उहाँको ठोकुवा छ ।
हुन पनि निगम टाट पल्टन लाग्ने तर त्यसका कर्मचारी काठमाडांैमा नयाँ महल थपेको थप्यै गर्ने ? पूर्वमन्त्री जोशीले भनेझैं के निगमका कर्मचारी पनि यस कार्यमा संलग्न छन् त ? यो एउटा खोजीको विषय बनेको छ । कहिले विमान खरिद त कहिले भाडामा लिँदा विवादमा मुछिँदै आएको निगममा अहिले भने भएका पुरानो विमान मर्मतमा घोटाला हुँदै आएको स्रोतको दाबी छ ।
नेपाल वायु सेवा निगम, नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक । तर नेवानिको नाम सुन्दा गर्व लाग्दैन हामीलाई । बरु दया लाग्छ । हजार होइन, लाख होइन, करोडौं करोड कमिशनमा गयो, भ्रष्टाचारमा डुब्यो । नेवानि मोटो हुँदा मोज गर्ने ठूलाबडा, नेवानि दुब्लाउँदा दया गर्ने सर्वसाधारण । हो, अहिले साँच्चै दुब्लाएको छ नेपाल वायु सेवा निगम । अस्तित्व नै संकटमा छ नेवानिको । तर अब नेवानिसँग धेरै शान छैन, सम्पत्ति पनि छैन । त्यसैले नेवानिका अधिकारीहरु बचेखुचेको सम्पत्ति बेचेर कवाडीमा कमिशन खाने चक्करमा नलागुन् । बरु पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीपका आधारमा नेवानीलाई अघि बढाउन । टाट पल्टिएको नेवानिले जीवन पायो भने निरश देशले पनि जीवन पाउला भनेर आशा गर्न सकिनेछ ।
स्रोत : बिश्वन्युज डटकम
Posted under : अतिथि स्तम्भ
2 Comments/ प्रतिक्रिया:
Nepali FM :
Hamro Desh ma yestai Bhrastha haru le garda desh ko bikash navako ho, yiniharu laai ta jakna parcha jail ma.
Adams Kevin :
सुझाव तथा टिप्पणी लेख्नुहोस
धेरै हेरिएको पोष्टहरु
सुशासन र यसको महत्व
Rabindra Neupane बि कासन्मोख राष्ट्रहरुको करिब तिन चार सय बर्षको इतिहास पढ्ने हो भने अतीतमा शासकहरूले राष्ट्रको भौगोलिक सीमा विस...
हेटौंडाको ऐतिहासीक परिचय
हेटौंडा बजार lनेपाल अधिराज्यको एकीकरण पूर्व मुकुन्दपुर राज्यको रुपमा प्रसिद्ध हालको मकवानपुर जिल्ला तथा यस आपसका क्षेत्रमा सेनवंशका मुकुन...
मकवानपुर जिल्लाको परिचय
पृष्ठभूमि देशकै मध्य भागमा अवस्थित यस मकवानपुर जिल्लाको नामकरण सेनवंशी प्रतापी राजा मुकुन्द सेनको नाम दर्शाउने गरी मुकुन्दपुर राखिएको र काल...
© 2007-2012, All Right Reserved Rabindra Neupane | | Powered by Rabindra Neupane
यो साइट अहिले सम्म पटक हेरिएको छ ।